National Power News:: स्मार्टफोनले कस्तो असर गरिरहेको छ बालबालिकालाई ? National Power News:: स्मार्टफोनले कस्तो असर गरिरहेको छ बालबालिकालाई ?
स्मार्टफोनले कस्तो असर गरिरहेको छ बालबालिकालाई ?
Monday, May 28, 2018 National Power
चिनमा स्मार्टफोनबाटै सारा आर्थिक काराबोर चल्न थालेको छ । भारतमा पनि यसको सुरुवात भइसकेको छ । आधुनिक र व्यस्त युगमा स्मार्टफोन बिनाको जिवनचर्या कल्पना गर्न सकिन्न । प्रविधिको विकाससँगै मानिसको हातहातमा आइपुगेको स्मार्टफोनको अनेकौं फाइदा छन् । परिवार या साथीसँग जुनसुकै बेला जहाँसुकै सम्पर्क गर्न र सदृश्य कुरा गर्न सकिने स्मार्टफोनको सही उपयोग नहुँदा यसका ‘साइड इफेक्ट’ पनि देखिन थालेका छन् ।
अचेल बच्चाहरुलाई व्यस्त राख्ने वा फकाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय ट्याबलेट र स्मार्टफोन भएको छ । महत्वपूर्ण काममा व्यस्त हुनुपर्दा अभिभावक स्मार्टफोन खेलाउन दिएर बच्चालाई भुलाउने गर्छन् । स्मार्टफोन बालबालिकालाई खुसी पार्न दिइन्छ । बच्चालाई गाडीमा चुपलागेर बस्न, रोएको बेलामा फकाउनसमेत स्मार्टफोन दिइन्छ ।
तर, विज्ञहरु भन्छन्, बच्चालाई स्मार्टफोन दिनु उचीत हैन । मनोविज्ञ र प्यारेन्टिङ गुरुहरुका अनुुसार आइप्याड, आइफोन, एन्ड्रोइड र अन्य ग्याजेटले बालबालिकामा नकारात्मक असर पार्छ । उनीहरुका अनुसार टचस्क्रिनसहितका ग्याजेट ३ वर्षभन्दा कमका बच्चालाई दिनै हुन्न । स्क्रिनमा धेरै हेर्ने बानीले बच्चाहरुको बिकास हुँदै गरेको मस्तिस्कमा असर गर्छ । हुन त नयाँ खालका उपकरण बच्चाहरुमा लोकप्रिय हुँदा त्यसले नकारात्मक असर गर्नसक्ने चिन्ता नयाँ हैन । पहिलो पटक भिडियो गेम आउँदा कतै यसले बच्चाहरुलाई हिंस्रक बनाउने हो कि भनेर सबै चिन्तित भएका थिए । यसैगरी टिभीले बच्चाहरुको आँखा खराब बनाउने तर्क पनि गरिन्थ्यो ।
टचस्क्रिन भएका डिभाइसको बारेमा अचेल उत्पन्न चिन्ता पनि त्यस्तै हुनसक्छ । ट्याब्लेट र स्मार्टफोन अझै पनि नयाँ छन् । यसका असर र बेफाइदाबारे पर्याप्त अध्ययन भएका छैनन् । केहि विज्ञले भने स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको प्रयोगलाई टेलिभिजनसँग तुलना गर्दै आएका छन् ।
– साना बच्चाहरुको मस्तिस्कको विकास तिव्र रुपमा भइरहेको हुन्छ । बच्चाहरुले स्क्रिन हेरेर भन्दा पनि मानिससँग अन्तक्रिया गरेर धेरै कुरा सिक्छन् । मानिसहरुसँग प्रत्यक्ष आँखा नजुधाइ स्मार्टफोन मात्रै हेरेर बसिरहेमा उनीहरुको मस्तिस्कको विकासमा असर गर्नसक्छ ।
-स्मार्टफोनले बच्चाहरुलाई आफ्ना आमाबुबा, दाइ र अन्य बच्चाहरुसँग घुलमिल हुनबाट बञ्चित गराउँछ । यसले बच्चाहरुको दृष्टिकोण, सहानुभुती, आँफैलाई बुझ्ने तरिका र आफन्तहरुसँग घुलमिल हुने नैसर्गिक मानविय स्वभावको विकासमा असर गर्छ ।
-उचित शारीरिक विकासका लागि बच्चाहरु धेरै सक्रिय हुनुपर्छ । उनीहरु सक्रिय भएर हिँडडुल गर्नुपर्छ । चौबिसै घन्टा निश्कृय भएर सोफा वा ओछ्यानमा बसेर मोबाईल वा ट्याब चलाउँदा शारीरिक विकासमा असर पर्छ ।
-बच्चाहरुले स्क्रिनमा हेर्ने मात्रै भन्दा पनि प्रत्यक्ष छोएर वा प्रत्यक्ष देखेर धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । त्यसैले बच्चाहरुको ज्ञानको विकासको लागि स्मार्टफोन त्यति प्रभावकारी हुँदैन ।
-विद्युतीय पुस्तक (इ-बुक)को माध्यमले पढ्ने बच्चाहरुले भन्दा साँच्चिकै पुस्तकबाट पढ्दा राम्रो ज्ञान पाएको देखिन्छ ।
-डाक्टरहरुका अनुसार धेरै स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको स्क्रिनमा भुल्नाले बच्चाहरुको आयु, ध्यान केन्द्रित गर्नसक्ने क्षमता र खानाको नियन्त्रणमा पनि असर पर्छ ।
-ट्याब्लेट र स्मार्टफोनमा भुल्दा बच्चाहरुको अरु क्रियाकलापमा लाग्ने समय खर्च हुन्छ । बच्चाहरुलाई बाहिर खेल्न, पढ्न र कल्पनाको लागि समय चाहिन्छ ।
-सन् २०१४ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटले बच्चाहरुलाई प्रत्यक्ष अन्तक्रियाबाट बञ्चित गराउँछ । जसले बच्चाहरुको सिक्ने सामाजिक सीपमा असर गर्छ र अरुको भावना नबुझ्ने बनाउँछ ।
-पढाईमा कमजोर र कम आम्दानी भएका आमाबुबाका बच्चाहरुमा स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको असर धेरै देखिएको छ । पढाइमा अब्बल विद्यार्थीहरुले स्मार्टफोन प्रयोग गरेपनि आफ्नो पढाइको स्तरलाई कायमै राखेका छन् ।
-स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट सिरानी नजिकै राखेर सुत्ने बच्चाहरु औसतमा प्रती रात २०।६ मिनेट अन्य बच्चाहरुभन्दा कम सुत्छन् । स्क्रिनले उत्सर्जन गर्ने निलो प्रकाशको कारणले मेलाटोनिन नामक हार्मोन कम हुन्छ । स्क्रिनमा धेरै समय बिताउँदा निदाउन पनि गाह्रो हुन्छ ।
फाइदा पनि छन्
केही शोधकर्ता र विज्ञले भने साना बच्चाहरुले टचस्क्रिनलाई प्रयोग गर्न नहुने लोकप्रिय मान्यतामाथि प्रश्न गर्दै आएका छन् । उनीहरुका भनाई छ, स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटजस्ता ग्याजेट प्रयोग गर्न दिँदा बच्चाहरुमा प्रविधि अनुकुलको चेतना विकास हुन्छ । जुन आजको युगमा नभइ हुन्न ।
स्मार्टफोन वा ट्याबको प्रयोगले बच्चा प्रविधिको बारेमा जिज्ञासु हुन सक्छ र यसबारेमा धेरै ज्ञान हासिल गर्न पनि सक्छ । यसले बच्चाहरुलाई भविष्यमा पनि धेरै सजिलो बनाउँछ । प्रविधि उनीहरुको विद्यालय सिकाइको एक हिस्सा हो । बच्चाले सानै उमेरमा संसारका विभिन्न कुराहरु थाहा पाउनु राम्रो ।
स्मार्टफोन दिँदा ख्याल गरौं
-बच्चाले स्मार्टफोन चलाइरहेको अवस्थालाई पनि अन्तक्रियात्मक बनाउनुहोस् । स्क्रिनमा आइरहेका कुराहरुको बारेमा बच्चासँग छलफल गर्नुहोस र बच्चाले स्क्रिनबाट वास्तविक जीवनमा के सिकिरहेको छ त्यो थाहा पाउनुहोस् ।
-डिभाइसमा छ भने बिल्ड-इन प्यारेन्टल कन्ट्रोल प्रयोग गर्नुहोस् । उनीहरुले अनलाइनमा के के गरिरहेका छन्, त्यसको बारेमा तपाईले उनीहरुसँग सोधपुछ गर्नुहोस् ।
-बच्चाहरु घरबाहिर भएको बेलामा स्मार्टफोनमा झुम्मिन नदिनुहोस् ।
-स्मार्टफोनमा बच्चाको लागि लक्षित गरि बनाइएका ज्ञानवर्द्धक र उपयुक्त हुने खालका एप्स, गेममात्रै चलाउन दिनुहोस् ।
-सुतेर टिभी हेर्नभन्दा पनि तपाईको बच्चालाई ट्याब्लेटमा वा स्मार्टफोनमा अन्तक्रियात्मक र सिर्जनात्मक सामग्रीहरु प्रयोग गर्न लगाउनुहोस् ।
-बच्चाले दिनमा कति समय स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट प्रयोग गर्ने त्यसको एउटा नियम बनाउनुहोस् ।
-टिनएजर्सहरु वा अलि ठूला बच्चाहरुलाई अनलाइनमा गर्ने व्यवहारबारे सिकाउनुहोस् ।
-बच्चाहरुलाई डिजिटल्ली इन्गेज हुनभन्दा पनि स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको स्क्रिनबाहिर सामाजिक अन्र्तक्रियामा बढि सहभागी हुन जोड दिनुहोस् ।